Home » Entries posted by Digireey
Entries posted by Digireey
Keylor Navas oo Caawa sugaya kulankiisii,,,,
5-tii August sanad Ciyaareedkii 2014-kii ayay ahayd markii uu qayb ka noqday goolhaye Keylor Navas Kooxda ku Ciyaarta garoonka Estadio Santiago Bernabeu ee Real Madrid. Kaddib dhacdadii Brazil ee Ciyaarihii Koobkii Aduunka ee Sanad Ciyaareedkii 2014-kii kabtanka Xulka qaranka Costa Rica Navas ayaa sedex sano ku qaadanaya Kooxda Los Blancos, xilli caawa uu rajaynaayo […]
Conte oo digtonow ugu jira xaalada Alex Sandro, kaddib markii uu hakad geliyay wadahadalo ku aadan hishiis kordhin
Tababaraha kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa ka war helay in daafaca bidix ee Kooxda Juventus Alex Sandro uu diiday in uu saxiixo hishiis cusub, sida laga soo xigtay wargeyska Evening Standard. Qaar ka mid ah Wargaysyada kasoo baxa gudaha magaalada London ayaa ku waramaya in Kooxda Blues ay damaceeda ku aadan helida Cayaariyahan Alex […]
Kumuu ahaa Xiddigii ugu horeeyay ee sameeyay Dabaal dega in Taageerayaasha la tuso Magaca iyo Lambarka Fanaanada ?
Weeriryahanka Kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed Cajiib ah kulankii ka dhacay Camp Nou fiinaalaha tartanka lugta hore ee Supercopa de Espana. Qaar ka mid ah Majaladaha kasoo baxa gudaha wadanka Spain ayaa baahiyay habkii uu u dabaal degay Kabtanka Portugal, ka hor inta aan Ciyaarta laga saarain dhamaadkii dheesha, […]
Ka hor kulanka El Clásico’ Barcelona oo ku dhawaaqday Xiddigaheeda iyo Kabtanka oo la xaqiijiyay in uu ka maqnaan doono iyo sababta oo la ogaaday
Hogaamiyaha Kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa xaqiijiyay maqnaanshiyaha Cayaariyahan Andres Iniesta, lugta labaad ee tartanka Supercopa de Espana. Maqnaanshiyaha Kabtanka Kooxda Blaugrana Andres Iniesta ayaa wajahaya xanuun dhanka bowdada, taas oo kaliftay in uu seego kulanka lugta labaad ee Estadio Santiago Bernabeu. Xiddigaha Rafinha Alcántara iyo si lamid ah Thomas Vermaelen ayaa soo […]
Sergi Roberto oo lala xiriirinayo qaar ka mid ah Kooxaha qaarada Yurub, United, Blues, Milan iyo Juve
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Kooxda Barcelona Sergi Roberto ayaa diyaar u ah in uu ka tago Spain si uu uwajaho England maalmaha soo socda. Cayaariyahan Roberto ayaa u sheegay warsidaha Sport ee kasoo baxa Catalania, kaddib markii ay Kooxdiisa xaqiijisay saxiixa Cayaariyahan Paulinho kaas oo ka soo tagay Kooxda Guangzhou Evergrande habeenimadii Isniinta. Ciyaaryahanka […]
Barcelona oo kalsooni ku qabta in qiimo dhan €200M-ay ku heli karto saxiix yada Dembele iyo Coutinho
Maamulka Kooxda Barcelona ayaa kalsooni ku qaba in Liverpool ay ka iibin doonto kalyantigeeda Philippe Coutinho, kaas oo bartilmaameed u ah Kooxda La Liga. Kaddib saxiixii ugu qaalisan ee ka dhaca dunida, Barca ayaa rabta in lacagahaas ay ku qarash garayso qaar ka mid ah saxiixyada ay ka rabto suuqa. kala iibsiga Cayaartoyda. […]
Arsenal oo helaysa bedelka Cayaariyahan Alexis Sanchez
Mustaqbalka Cayaariyahan Karim Benzema ee garoonka Santiago Bernabéu Stadium ayaa shaki xoogan la gelinayaa, iyadoo Los Blancos ay diirada saareyso saxiixa Weeriryahanka Kooxda AS Monaco Kylian Mbappe. Arsenal ayaa dooneysa in ay ka faa’iideysto xaalada Cayaariyahan Benzema, iyadoo Macalin Wenger muddo dheer lala xiriirinayay weeraryahankii hore ee Kooxda Lyon, kaas oo laga yaaabo in […]
Blaise Matuidi oo saacadaha soo adan ku biiri doona Kooxda,,,
Juventus ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhow dahay saxiixa Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Paris Saint-Germain Blaise Matuidi, sidaay sheegayaan wararka laga helaayo gacanka Talayaaniga. Bianconeri ayaa sii xoojisay xiisaha ay u qabto xiddiga khadka dhexe ee Xulka qaramka Faransiiska Matuidi, kaasoo ay ku dhowdahay in ay lasoo saxiixato xagaagii lasoo dhaafay, […]
Mid ka mid ah Weeriryahanada Kooxda AC Milan oo u duulay Spain si uu ugu biiro Kooxda,,,
Wararka kaa imaanaya gudaha Wadanka Talyaaniga ayaa sheegaya in Weeriryahanka Kooxda AC Milan Carlos Bacca uu u duulay Spain, si uu wada hadalo ula furto Maamulka guud ee Kooxda Villarreal. Xiddiga heerka Caalami ee Wadanka Colambia Bacca ayaa ku dhow in uu hishiis shaqsi ah la gaaro Kooxda Villarreal, hase ahaatee Kooxda reer Talyaani […]
Inter oo kaga horaysa dhigeeda Barcelona saxiixa Weeriryahanka Kooxda PSG,,,,
Inter Milan ayaa lagu soo waramayaa in ay xiiseynayso adeega Weeriryahanka Kooxda Paris Saint-Germain Julian Draxler, inkastoo wakiilkiisa uu ku adkeysanayo inuu sii joogayo Kooxda Paris. Kooxda Faransiiska ayaa dhawaan xaqiijisay saxiixay Weeriryahankii hore ee Kooxda Barcelona Neymar, kaddib markii ay ku qarasha garaysay aduun dhan € 222-milyan, hase ahaatee waxaa la rumeysan yahay […]